New Zealand waxay ku socotaa xiritaanka waddanka oo dhan hal kiis COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Cusub ee New Zealand » New Zealand waxay ku socotaa xiritaanka waddanka oo dhan hal kiis COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Ra’iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern
Xiritaanka waddanka New Zealand waxaa sabab u ah saddexdii maalmood ee la soo dhaafay, halka Auckland iyo Coromandel Peninsula xannibaaddu waxay socon doontaa toddobaad.
Hal kiis oo cusub oo COVID-19 ah ayaa laga soo sheegay New Zealand.
Raiisel wasaaraha New Zealand wuxuu ku dhawaaqay xannibaadda waddanka oo dhan.
New Zealand waxay ka takhalusaysaa fayraska marxaladaha hore.
Isagoo ka hadlayey shir jaraa'id shalay, Raiisel wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday in kiwis ay hoos imaan doonto xiritaanka 'heerka afaraad' ee waddanka oo dhan laga bilaabo 11:59 pm waqtiga maxalliga ah (11:59 am GMT) ka dib markii la soo tebiyay hal COVID-19 cusub kiiska Auckland.
Sida laga soo xigtay Ardern, kiiska coronavirus ayaa laga helay Auckland waana caabuqii ugu horreeyay ee ay bulshadu gudbiso tan iyo bishii Febraayo.
Raiisel wasaaraha ayaa yiri, "Waxaa wanaagsan in la bilaabo sare oo hoos loo dhaadhaco heerar halkii laga bilaabi lahaa mid aad u hooseeya, aan la hayn fayraska oo la arko inuu dhaqso u socdo," soo saaro fayraska marxaladaha hore.
Xiritaanka waddanka oo dhan waxaa sabab u ah saddex maalmood oo la soo dhaafay, halka Auckland iyo Coromandel Peninsula xannibaaddu waxay socon doontaa toddobaad. Xayiraadaha 'heerka feejignaanta afaraad'-tallaabooyinka ugu adag ee New Zealand-kiwi ayaa awood u leh inay guryahooda uga baxaan farmasiyada, raashinka, baaritaanka COVID-19, daryeel caafimaad iyo jimicsiga xaafadda.
Wali lama go'aamin haddii kala duwanaanshaha Delta uu mas'uul ka yahay kiiska COVID-19 ee New Zealand.
Dhacdada go'doonsan ayaa ah caabuqii ugu horreeyay ee gudaha laga soo gudbiyo tan iyo 28-kii Febraayo, taasoo jabisay lixdii bilood ee ay socotay iyada oo aysan jirin hal kiis oo bulshada ah.
Raiisel wasaaruhu wuxuu hormuud ka ahaa siyaasad ku saabsan qufulka jawaabta hore iyo xiritaanka adag ee xadka si loo joojiyo caabuqyada ku soo qulqulaya qaranka. Toddobaadkii hore, Ardern wuxuu ku dhawaaqay in New Zealand ay dib u furi doonto xuduudaheeda horraanta 2022 marka dadka intiisa badan la tallaalo.
Tan iyo markii uu dillaacay COVID-19 horraantii 2020, umadda ilaa 5 milyan ayaa si weyn uga soo kabatay masiibada marka loo eego waddamada kale, iyadoo diiwaangelisay in ka badan 2,500 xaaladood iyo 26 dhimasho ah.
Diyaaradda Pakistan ayaa joojisay duulimaadyadii Kabul kadib markii Taliban ...
Busted! Ajaanibta ku dhuumaalaysta kuna cabba baarka Thailand
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Hindiya: Waxay u Wanaagsan yihiin Kaabayaasha iyo ...
Beaches® Resorts waxay rabtaa inay ayeeyooyinkaaga ka dhigto ...